Posted by Tranquillus | Sep 12, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Qoyska sidoo kale jawiga xirfadeed, ogaanshaha sida loo dhagaysto waxay suurto gal ka dhigaysaa xalinta ama ka fogaanshaha dhibaatooyin badan iyo dejinta xaalado badan. Tani waa sababta ay tahay in qof kastaa barto inuu dhageysto kan kale si uu sifiican ugu fahmo waxa uu sheegayo, iyadoo lafilayo wadahadal wax ku ool ah. Si kastaba ha noqotee, xirfad noocan oo kale ah ma aha mid lagu dhasho, waxaa lagu soo qaatay tababar. Sidee iyo sababta loo dhagaysto si wax ku ool ah? Waa kuwan jawaabaha.
Xidho iyo hadal yar
Dhageysiga macnihiisu waa marka ugu horeysa ee la aamusnaado oo qofka kale u sheego inuu sheego ama uu sheego waxa ay ka fekerayaan xaalad. Sidaas awgeed waa inaad ka taxadartaa inaadan isaga jarin adigoo u sheegaya xaalad la mid ah dhowaanahan ama xasuus la mid ah. Xaqiiqdii, adiga kuma saabsan, waa qofka. Sidoo kale, marka qof uu rabo inuu kula hadlo, waxaa dhif ah inuu maqlo adiga oo ka hadlaya adiga. Wixii uu ku weyddiisan lahaa waa in la dhegeysto, sidaas darteed ha u hadlo haddii aad ogolaatay inaad dhegaysato.
Isku kalsoonow qofka iyo waxa ay yiraahdaan
Dhageysiga wuxuu sidoo kale ku jiraa diiradda saaraya qofka iyo waxa ay yiraahdaan. Taas macnaheedu waa, ha ka fekerin waxaad ka jawaabi kartid, laakiin marka hore iskuday inaad fahamto xaaladdiisa. Siinta dhageysiga waa runtii sida kaliya ee loo caawin karo isaga, taas oo kaa dhigi doonta welwelkaaga walwalkaaga si aad si xoog leh diirada u saarto. Sidaa darteed, ha ka welwelin waxa aad ka jawaabi kartid, marka hore fiiri waxa ay kuu sheegayso.
Inaad adigu dhagaysato waxaa loola jeedaa in aad u fiirsato oo kalsooni ku qabato qofka kale iyada oo ay ku hadlayso iyada oo aan isku dayin in ay xukumaan ama xukumo. Runtii, haddii dabeecadaada ay muujineyso ka soo hor jeedda, waxay macnaheedu noqon kartaa qofka aad la hadlayso in uu kugu dhibaateeyo oo uu yarayn doono dayactirka ama wada hadalka. Wax kasta oo laga yaabo in ujeedada ugu dambeysa ee dambe, waa dadaal lumis ah, sababtoo ah mid kale ma noqon karo mid kalsooni ama dib uga laaban karo.
Ujeedada dhagaysiga si taxaddar leh waa in uu awood u yeesho in uu is weydaarsado ama la wadaago fikradaha qofka si uu u helo natiijo ama xalka dhibaatada kuugu keeneysa. Joogista dhexdhexaadinta iyo ujeedadu waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaaddo tallaabo weyn oo ku saabsan xalinta dhibaatooyinka iyo bixinta talooyin ku haboon sida loo baahdo.
Weydii su'aalaha saxda ah
Si aad u hesho hoose ee dhibaatada, waxaad u baahan tahay inaad weydiiso su'aalaha saxda ah. Tani waxay shaqaynaysaa haddii ay tahay wareysi shaqo, sababaha maqnaanshaha shaqada ama kuwa kale. Adigoo si toos ah u soo dhigaya, waxaad hubaal ka dhigan kartaa in aad soo dejiso jawaabo sax ah, taas oo kuu ogolaan doonta inaad caddayn ka hesho mawduuca. Sidaa awgeed, haddii shaadadu sii socoto, waxaad si deg deg ah u ogaan doontaa oo u heli doontaa macluumaad tayo leh.
Ha xukumin qofka
Sidii hore loo sharraxay, ha sameynin wax xukun ah qofka, laakiin ujeedada ujeedada ah, si aad u qaadato dhaqdhaqaaqyada, muuqaalka iyo codka oo la isku kalsoon yahay oo ka soo horjeeda dhibaatooyinka. Dabeecaddan waxaa si gaar ah loogu talinayaa haddii ay dhacdo iska horimaadyo udhaxeeya dhowr kooxood oo kala duwan ama kuwo kale. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan dhinacna qaadaneynin iyo inaad kaliya isku dayeyso inaad hesho waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo si loo xaliyo xaaladda.
U daneeyow waxa uu qofka kale leeyahay
Waa inaad sidoo kale xiiseyneysaa waxa uu qofku sheegayo. Run ahaantii, laguma qancin karo haddii aadan muujin calaamadaha muuqaalka iyo calaamadaha oo caddaynaya in aad bixiso dhammaan dareenkaaga. Tusaale ahaan, madaxaaga ka fiiri marwalba si aad ugu dhiirigeliso inay sii wado sharaxaadkeeda ama inay sheegto inaad ku raacsan tahay waxa ay tiraahdo. Haddii ay kugu adkaato markaad barato xirfad u baahan xirfad dhegeysiga, waa inaad tababbarto oo aad ku tababarto jimicsi.
Ha bixin talo bixin
Xaaladaha qaarkood, haddii qofka kale uusan weydiisan talo, ha siin wax talo ah. Waxaa laga yaabaa in uu kaliya raadinayo dhegeysiga oo u fiirsasho leh oo naxariis leh, kaliya inuu iska qaado culeys weyn. Haddii uu ka cabanayo adiga ama dareen-celintaada, ha u hadlo oo ha faaruqiyo boorsadiisa sida ay yiraahdaan. Marka uu dhammeeyo hadalka, isku day in aad u sharaxdid waxyaabaha isaga si degan oo u dhiga dhamaan qodobada lagama maarmaanka ah ee cad.
Sidaa darteed, wuu ogaan doonaa in aad si dhab ah u dhagaysato isaga oo aan u baahnayn inuu mar walba ku celiyo wixii isku mid ah haddii ay dhacdo cabashooyin.
Adiga oo aan kugula heshiin qofka kula hadlaya, waad dhagaysan kartaa, laakiin halkii aad diiddan tahay, waxaad arki kartaa xaaladaada aragtidaada. Markaad sidan oo kale u socoto, waxaad hubtaa in aad si fiican u fahamtid oo aad aragto aragtidaada aragtidaada. Haddii aanad aqbalin waxa uu qofku u malaynayo ama sheegayo, waad awoodi kartaa qaado dabeecad wanaagsan horteeda si ay u dejiyaan xaaladda.
Si kastaba ha noqotee, dhegaysigu macnaheedu maahan inuu jiro ama aan la heli karin wakhti kasta
Kiisaska qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waxay ka reebban yihiin xeerka. Xaqiiqdii, inkasta oo ay tahay aqoon-u-hel ama qaab-u -dhigid is-qabsi ah oo la xidhiidha dhinaca kale, haysashada awooddan dhagaysiga waa in aan lagu jahwareersanayn duullaan ama aan kala sooc lahayn.
Ha u oggolaan dadka kale in ay ku qabtaan
Ha maqlin cabsida ah inaadan daryeeli karin ama jecelaynin. Xaqiiqdii, waa suurtagal in aad qof walba dhageysato oo aad isku daydo inaad xalliso dhibaatooyinka suurtogalka ah iyo kuwa la filan karo. Waa inaad kala soocdaa ujeedada dhageysiga iyo dhegeysiga suuban, taas oo kuu keeni karta isbuunyo kaas oo nuugaya dhammaan walwalka saaxiibadaa adigoon awoodin inaad xalliso midkoodna.
Ha maqlin waxa la yiri
Dabeecadda ka soo horjeedka ah waxay noqonaysaa inay iska dhigaan inay wax dhagaystaan, dadka qaarkiis dhab kama fiirsadaan waxa loo sheegayo. Waxa kaliya ee ay ka walwalaan ayaa ah inay awoodaan inay keenaan doodo, iyagoon dhageysan waxa kale ee dhabta ah ee uu doonayo inuu ogaado. Marka iyagu dan kama lihi kuwa aan u shaqeyn iyaga oo kale oo xitaa kuma mashquuliyaan inay iska dhigaan inay iyaga daneeyaan inta badan.
Dhinaca dhexe ee ka dhexeeya labadan xagjir waxay noqon doonaan kuwo xushmeynaya iyada oo aan loo baahnayn in lagu mashquuliyo dadka had iyo jeer haysta wax ay ku eedeeyaan kuwa kale ama ay aad u fogaadaan.
Sidee loo dhegeystaa si waxtar leh? Sebtembar 12th, 2018Tranquillus
horeSirdoonka shucuurta ee shaqada
socdaSidee loo kobciyaa mid ka mid ah awooda xukunka?